Saddex Qalad Oo Dhimasho Ahaa Oo Uu Tababare Thomas Tuchel Sameeyey Oo Sababay Guul-darradii & Bahdilkii Blues Ee West Brom - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaSaddex Qalad Oo Dhimasho Ahaa Oo Uu Tababare Thomas Tuchel Sameeyey Oo Sababay Guul-darradii & Bahdilkii Blues Ee West Brom
Saddex Qalad Oo Dhimasho Ahaa Oo Uu Tababare Thomas Tuchel Sameeyey Oo Sababay Guul-darradii & Bahdilkii Blues Ee West Brom
Chelsea ayaa guul-darradii ugu horreysay intii uu Thomas Tuchel uu tababaraha ahaa kala kulantay West Brom oo ku burburisay 5-2.
Christian Pulisic ayaa Blues hoggaanka u dhiibay daqiiqaddii 27aad kaddib saddex darbadood oo uu goolhaye Sam Johnstone ka badbaadiyey Marco Alonso. Laakiin hal daqiiqo kaddib ayuu difaaca reer Brazil ee Thiago Silva uu qaatay kaadh digniin ah markii uu qalad ku galay Matheus Pereira waxaana inyar kaddib loogu daray kadh cas isagoo taako xun ku qabtay Okay Yokuslu, taas oo ciyaartoyda Blues ka dhigtay toban laacib.
West Brom ayaa afar gool oo isku xiga ku suuxisay difaaca Chelsea oo kala-daatay markii uu ka baxay Thiago Silva, waxaana soo tarraxay Mason Mount ka hor intii aanu ciyaarta 5-2 ka dhigin Callum Robinson oo laba gool dhaliyey.
Tababare Thomas Tuchel oo ay u ahayd guul-darradii ugu horreysay ee intii uu kooxdan tababaraha u ahaa, ayaa ciyaartan sameeyey saddex qalad oo sabab u noqday guul-darrada soo gaadhay kooxdiisa.
1. Kusoo bilaabiddii Thiago Silva
Thiago Silva oo 11kii ciyaarood ee ugu dambeeyey ee Chelsea kaga maqnaa dhaawac ayaa si toos ah markii uu tababarka kusoo laabtayba uu Tuchel ugu soo bilaabay halkii ay ahayd inuu beddel kusoo geliyo amaba uu waqti badan oo uu tababarka ku qaato siiyo.
Ku dhowaad laba bilood oo uu garoomada ka maqnaa, Rilva ayaa muujiyey in aanu lahayn firfircoonidii iyo taam ahaanshihii jidheed, taasina waxay keentay in marka uu isku dayayo inuu ciyaartoyda kubadda kula loollamo, in lugtiisu culays ahaato oo aanu halkii uu doonayay la helin, taas oo keentay in laba kaadh oo digniin ah uu qaato, daqiiqaddii 28aadna uu garoonka ka baxo.
2. Kala doorashadii Jorginho iyo Gilmour
Kaadhkii casaa ee Silva ayaa dhab ahaantii ciyaarta isbeddel ku sameeyey, waxaase labada kaadh ee uu qaatayba sabab u ahaa Jorginho oo labada jeerba aan booskiisa qabsanin, isla markaana sabab ugu noqday Thiago Silva inuu qaato go’aanka uu halista isku geliyey.
Jorginho waxa kale oo uu qalad toos ah ku lahaa goolka labaad ee West Brom iyadoo kubad uu madaxeeyey uu si toos ah ugu dhiibay Mbaye Diagne oo isaguna u sallaxay Pereira.
Tuchel ayay ahayd in uu ciyaarsiiyo Billy Gilmour oo wacdaro ka dhigay ciyaartii FA Cup ee Chelsea ay ku garaacday Sheffield United ka hor kulamadii caalamiga ahaa, iyadoo da’yarkaasi uu waliba firfircooni dheeraad ah lahaa marka la barbar-dhigo Jorginho oo daal badan ka muuqday.
3. In aanu kusoo bilaabin Mason Mount
Kaddib saddexdii ciyaarood ee xulka qaranka England ee isreeb-reebka Koobka Adduunka oo uu soo dheelay, layaab may ahayn in Mason Mount uu kaydka kusoo bilowdo, sidoo kalena uu Tuchel kasii fikirayo ciyaarta wareegga siddeeda Champions League ee FC Porto.
Markii uu soo galay Mason Mount, waxa uu muujiyey firfircooni iyo dardar uu kooxda kusoo kordhiyey inkasta oo uu ka joojin kari waayey goolasha daadka ah ee ku socday.
Si kastaba, waxa Tuchel u fiicnaan lahayd in uu kusoo bilaabo Mason Mount.